amniga Archives - Axadle
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa ku shiray Xaaladda
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay leeyahay Maarso 12, 2021 Jimcihii, maalin kadib fadhigii looga hadlay dhibaatada ka taagan Soomaaliya, sida lagu sheegay bayaan ay soo dhigeen bartooda. Fadhiya Golaha Amniga guud ahaan xaaladaha si wada jir ah looga wada hadlo Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Itoobiya & Mozambique, laakiin markay timaado dhinaca xogta Soomaaliya ayaa si gaar ah loo qiimeeyaa. Wargeyska Siyaasadda Dibadda diyaariyey maqaal dheer oo ku saabsan kulanka Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay oo warbixin ka…
Deni & Qoor-Qoor oo ka wada hadlaya amniga
Madaxweynayaasha Puntland, Saciid C / laahi Deni iyo Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa maanta ku shiraya waqooyiga magaalada Gaalkacyo iyagoo ka wada hadlaya amniga magaalada oo kala qeybisa labada maamul. Ilo xog ogaal ah ayaa Axadle u sheegay in saraakiisha hordhaca ah ee wafdiga uu hogaaminayo Hogaamiye Saciid Deni ay aadeen Waqooyiga Gaalkacyo si ay u adkeeyaan amaanka isla markaana heegan la galiyay ciidamada amaanka ee magaalada. Koonfurta, hawlgal amni ayaa ka socda, ciidamo ayaa la dhigay waddooyinka…